ILima ▪︎ IApartment yaseLuxe Beach & Infinity Pool
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguLouisa
*UMthintelo we-COVID WAMVA* (uhlaziywe)
Amachibi avulwa kwakhona
Ipakethi yokuSetyenzisa iSpa kunye neGym Day (intlawulo eyongezelelweyo)
Zive usekhaya ngokupheleleyo ngolu hlobo lwaseYurophu-i-3 yokulala ekhululekile.
Ifakwe kwi-ultra-luxury condominium Wai Wai, kanye elunxwemeni.
Ichibi elingenasiphelo elinombono wolwandle, ibha emanzi, ichibi labantwana, i-sauna, ibala lentenetya, ibala lebhola ekhatywayo, ijimu, itafile yentenetya, indawo yokutyela (evulwa ngeempelaveki kuphela).
*Iibhayisekile ziyafumaneka simahla*
Ifulethi elitofotofo lamkela iindwendwe ezi-6 ngokukhululeka. Iphelele kwiintsapho (abantwana bayayithanda), ikhuselekile njengoko kungekho zimoto zijikelezayo kwi-complex (yokupaka i-undergorund). Kwakhona yindawo entle yeqela labahlobo okanye izibini ezifuna ukuphumla.
Akukho bamelwane bangaphambili nje igadi entle ezisa ukuphumla.
Ngokuqhelekileyo indawo yokutyela ye-complex ivuliwe ngeempelaveki kunye neeholide.
Kukho amagumbi okulala ama-3 kunye namagumbi okuhlambela ayi-2 1/2. Akukho mfuneko yakukhathazeka malunga nokuzisa izinto zokulala kunye nebhafu. Izinto zokucoca zasimahla, isepha yesandla, isepha yokuhlamba izitya zibandakanyiwe. Kukho amashiti ongezelelweyo, iitawuli kwaye kukho umatshini wokuhlamba / wokomisa kwigumbi lokuhlala.
Ikhitshi inazo zonke izixhobo zokupheka kunye nezixhobo zombane ezikhoyo kunye nesitovu, i-oveni, ifriji, umatshini wekofu, isipholile samanzi, kunye neblender.
Ukubukela iTV, i-Intanethi okanye uthotho lwakho oluthandayo kwiNetflix ufumana ebomini iSMART TV (ubhaliso lweNetflix lubandakanyiwe).
I-Apartment ine-terrace enkulu enezitulo zokuphumla ezitofotofo kunye netafile ende yesidlo sangokuhlwa ukonwabela isidlo esithandekayo. Kukwakho neseti yebarbecue oza kuyisebenzisa.
Le ndlu ibekwe kumgangatho ongasentla kumgangatho osezantsi kwibhloko engu-B ekwindawo esezantsi yendawo ekuchithelwa kuyo iiholide (ekufuphi nolwandle kunye nephuli). Ukusuka kwi-terrace, kukho umbono wolwandle olusecaleni. Indlu ijolise kwindawo epholileyo (empuma) ngoko unokulindela impepho epholileyo evela elwandle kunye nobushushu obuncinci belanga kunye nokujongana necala lokuphuma kwelanga.
IWai Wai ikwayindawo egqibeleleyo yeKite. Kukho icompressor yomoya kunye nogcino lweekites ecaleni kolwandle.
Ngeveki iWai Wai condominium iphumle kakhulu, ilungile ukuba ufuna ukuzola kwaye ngeempelaveki nangeeholide, kukho umsebenzi omninzi, omangalisayo wabantwana.
Umbindi weCumbuco umgama wokuhamba (imizuzu engama-20). Sikwanazo neebhayisekile ezifumaneka simahla.
4.90 ·Izimvo eziyi-96
4.90 · Izimvo eziyi-96
Le complex inegadi engakholelekiyo, indawo yokuphumla, ichibi elingapheliyo, iinkundla zentenetya, ibala lebhola, i-sauna, igumbi lomdlalo kunye nejimu. Ngokuqinisekileyo eyona condominium igqwesileyo kwiNdawo yaseCumbuco.
Hamba ukusuka echibini ukuya ngqo elunxwemeni kwaye ube nethuba lokuya kitesurfing okanye ukonwabele eminye imisebenzi yamanzi. Hamba ecaleni kolwandle kwaye uhambe uye eCumbuco Village apho unokufumana iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela kunye neebhari ezipholileyo zokuphuma ebusuku.
Umbuki zindwendwe ngu- Louisa
Ndiyafumaneka 24/7 ukuphendula imibuzo yakho ngomnxeba.
*UMthintelo we-COVID YAM ngoku*
I-Spa kunye neGym zivulwa (intlawulo eyongezelelweyo yokusetyenziswa koSuku)
UKUSETYENZISWA KWEEMAski KUNYANZELEKILE KWIINDAWO ZIKAWONKE-WONKE.
I-Spa kunye neGym zivulwa (intlawulo eyongezelelweyo yokuset…
Iilwimi: Nederlands, English, Português, Español
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$185